Igbo Mass Readings for January 7 2022 | Catholic Lectionary
Ihe Ogugu nke mbu: 5:14-21
Nke a bu ntukwasiobi anyi nwere na ya, na o buru na anyi ario ihe obula dika uche ya si di, O na ege anyi nti. O buru na anyi ma na O na-ege anyi nti n’ihe obula anyi rioro, anyi amara na anyi enwetala ihe niile anyi rioro ya. O buru na onye obula ahu nwanne ya ka o na eme obere njo, o ga arioro ya aririo, Chineke ga-enye nwanne ya ahu ndu, maka na njo ahu abughi njo ogbugbu. Enwere njo nke bu nnukwu njo. Anaghi m ekwu ka mmadu kpee ekpere maka nke ahu. Omume niile na-ezighi ezi bu njo. Mana e nwere nke na abughi nnukwu njo. Anyi ma na onye obula a muru na Chineke anaghi eme njo, n’ihina Kristi Nwa nke Chukwu na-echekwa ya. Onyeiro ahu anaghi emetu ya aka. Anyi ma na anyi bu ndi nke Chineke, mana uwa niile no n’ike nke ajo onye ahu. Anyi makwa na Nwa nke Chukwu abiala, o nyekwara anyi nghota imata onye ahu bu Eziokwu. Anyi nokwa n’ime onye ahu bu Eziokwu, n’ime Nwa ya bu Jesu Kristi. Nke a bu ezi Chineke ahu na ndu ebighiebi. Umuntakiri, zerenu ikpere arusi.
ABUOMA NA AZIZA: Ps: 149:1-2, 3-4, 5, 6, 9.
Aziza: Onyenweanyi nwere ihunaanya n’ebe ndi nke ya no.
Kweerenu Onyenweanyi ukwe ohuru,
ka ogbako ndi kwere na ya kweere ya ukwe otito.
Ka Izrel nuria na ihi onye kere ya,
ka umu Zayon nuria na ihi onye eze ha. Az./
Ka ha were igba egwu too aha ya,
ka ha were igba na ubo akwara gbaara ya egwu.
N’ihina Onyenweanyi nwere ihunaanya n’ebendi nke ya no,
O kpubela ndį umeala okpu nke mmeri. Az./
Ka ndi nke ya nuria na mmeri ha.
Ka ha daa n’ala n’ihu Chineke, na-eto ya oge niile.
Ka nnukwu ukwe otito Chineke juputa n’onu ha,
nke a bu otito nke ndi nke ya kwere ekwe. Alleluia!. Az./
Ubochi di aso adakwasala anyi, Mba niile bia sekpuoru Dinwenu, Taa nnukwu ihe achakwasala anyi.
ΟΖΙΟΜΑ: 2: 1-12
N’ubochi nke ato e nwere oriri agbamakwukwo na Kena nke di na Galili, nne Jesu gakwara ebe ahu. E zikwara Jesu na ndi na-eso uzo ya n’oriro agbamakwukwo a. Mgbe mmanya gwuchara nne Jesu siri ya, “Ha enweghizi mmanya.” Jesu zara ya si, “Nwaanyi, olee uzo nke a si gbasa mu na gi? Oge nke m erubeghi.” Nne ya gwara ndi na eje ozi si, “Meenu ihe obula o si unu mee.”
Dika omenaala isa ukwu na aka nke ndi Juu siri di, ite mmiri nkume isii doro n’ebe ahu. Nke obula n’ime ha na-eri ihe dika udu mmiri iri abuo ma o bu iri ato. Jesu gwara ha si, “Gbajuputanu ha n’onu.” O siri ha, “Ngwa gbaputanu ufodu bugara onye isi oriri.” Ha mere nke a. Mgbe onye isi oriri deturu mmiri ahu e mere ka o buru mmanya onu, o maghi ebe o si puta. (Ma ndi na eje ozi, ndi gbaputara mmiri ahu, maara ebe o si). O kporo onye na-alu nwaanyi, si ya, “Onye obula na-ele obia, na ebu uzo buputa mmanya di uto. Mgbe ndi mmadu nujuchara afo ha, o buputazie nke na-adighi mma. Ma gi onwe gi hapuru ibute mmanya di uto ruo ugbu a.” Nke a bu oru ebube nke mbu n’ime oru ebube ya niile. O bu na Kena nke Galili ka o ruru ya. O gosiputara ebube ya, ndi na-eso uzo ya kwekwara na ya. Mgbe nke a gachara, Jesu gbadara na Kapanaum, ya na nne ya, umunne ya na ndi na-eso uzo ya. Ha noro ebe ahu ubochi olemaole.
Igbo Mass Readings for Monday after Epiphany (Monde na-eso Epifani )